Global Voices teny Malagasy » Koety: Mpampiasa Twitter Shiita Voasambotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jona 2011 3:06 GMT 1	 · Mpanoratra Mona Kareem Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Koety, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Mbola tsy nisy tranga ohatra ity taloha tao Koetyhoe mpampiasa Twitter voasambotra noho ny zavatra nosoratany tanaty aterineto, raha tsy ny nahazo an'i Nasser Abul (@NasserAbuL ), tanora Shiita  avy ao Koety, naiditra am-ponja telo andro lasa izao.
Efa nisy tranga indray mandeha tahaka izany ihany teo aloha, Koetiana mpampiasa Twitter antsoina hoe Mishari Buyabis (@mbuyabis ) nalain'ny polisy am-bavany noho ny fanakianany ny Governemanta, fa tsy notànana akory.
Izany vaovao izany dia nahatonga savorovoro tao amin'ny habakin'ny cyber Koetiana ny marainan'ny 10 Jona izay nihevitra fa nosamborin'ny polisim-pirenena i Abul fa manohitohina ny filaminam-pirenena ary tsy navela nihaona tamin'ny fianakaviany na ny mpisolovava azy.
Mpandefa Tweet maro avy ao Kuwait no niampanga io fihetsika io ho tsy araky ny lalàna ,nefa koa mpanoratra maro tsy mitonona anarana ao amin'ny Aterineto no nankasitraka io satria i Abul dia malaza ho Shiita henjam-pihetsika mampiasa teny maloto anaty aterineto sy manohana ny Fitondrana Syriana, sady manakiana ny Fitondrana Bahraini sy Saodiana. Nivadika tsotra izao ho adin'antokon'olona anaty aterineto izany raharaha izany.
Koetiana mpanoratra sady mpanao sarimiaina i Jafar Rajab (@jafarrajab ), isan'ireo olona nandefa Tweet voalohanymikasika ilay raharaha fisamborana an'i Abul. Niampanga io fihetsika io izy tamin'ny filazany fa fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra izany (Ar):
sarin'ilay mpandefa tweet Nasser Abul voatazona am-ponja (manao mangamanga) nalaina avy ao amin'ny kaontiny twitter.
@jafarrajab  mila mijoro miaraka amin'i Nasser Abul ianao, tsy ny hiaro ny heviny fa kosa hiaro ny fahalalahany haneho hevitra…
Koetiana mafàna fo sady bilaogera ary mpilaza vaovao misongadina, Dhari Al-Jutaili (@Dhari_ ) koa dia mbola nandà ny zava-nitranga tamin'i Abul ka niteny hoe:
@Dhari_ Tsy any amin'ny hoe mahery fo sa tsia i Abul, na koa hoe miombon-kevitra aminy ve izahay sa tsia .Tsy any ny olana. Fa izao, tokony tsy hisy olona tazonina andro maro izany ka tsy misy mahalala izay manjo azy..
Parlemantera Shiita avy ao Koety iHassan Jawhar (@HasanJohar ) nanoratra Tweet hanoherana ny fisamborana an'i Abul, ka nanao fangatahana tamin'ny Ministeran'ny Atitany hanàfaka an'i Abul.
@HasanJohar  Ny fisamborana ilay mpandefa Tweet, Nasser Abul, dia fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra ary tsy tokony tazonina am-ponja tsy misy fiampangàna Izy.Ny Ministeran'ny Atitany no tokony tazonina ho tompon'antoka amin'izao raharaha izao.
Koetiana iray mpandefa Tweet, Ahmad AlHendal (@ahmadhendal ) nahita fa ny fisamborana an'i Abul dia fitaovana izay nampiasàna ny tanora Koetiana hanalàna ny Praiministra Sheikh Nasser Al-Mohammed.
@ahmedhendal Moa ve io fihetsika fisamborana tanora Koetiana io, làlana iray hanadalàna ny Governemanta ary koa hanosehana azy amin'ny firodànana? Tafiditra amin'ny adilahy politika koa ve izany ny tanora Koetiana?
Koetiana iray hafa mpandefa Tweet, Dr. Fawaz Farhan (@FawazFarhan ) no nandefa Tweet maro momba ny zava-nitranga tamin'i Abul ka nilaza hoe ny fomba fanakianan'i Abul ny Fitondrana any amin'ny firenena hafa dia zony.
@FawazFarhan  manan-jo hitsikera ireo fitondrana feno herisetra aho sy hanohana ireo firenena mangata-piovàna ankalalahana (tahaka ny nankasitrahan'ireo firenena ao amin'ny Golf ny hetsika tao Libia) ary tsy manana zo hibaiko ahy ny amin'ny zavatra tokony lazaiko ny fitondrana Arabo.
Mpandefa Tweet , Salem Al-Ajmi (@engrsalemq8 ) nanoratra hoe:
@engrsalemq8  manohana ny fampiharana ny lalàna amin'ny Nasser Abul izahay fa tsy tena mirona be loatra amin'io raharaha io. Tokony hiatrika fitsarana izy fa tsy avela any amin'ny tranomaizina eo ambany fanarahamason'ny Polisy ela intsony mba tsy ho lasa fahazaran-dratsy izany.
Koetiana mpamorona endri-javatra, Mohammed Sharaf izay fanta-daza tato ho ato tao amin'ny Twitter amin'ny fahaizany mamokatra asa hiarovana karazana tranga isan-karazany dia niasa tamin'io tranga io mba hanehoana ny fandàvany ny fanitsakitsahana ny zo haneho hevitra tamin'ny fisamborana an'i Abul:
Asa fanomezan'endrika nataon' i @MohammadRSharaf ho fanoherana ny fisamborana an'i Nasser Abul@MohammadRSharaf.
Mpandefa Tweet maromaro no nanasa vahoaka hiangona eo anoloan'ny tranoben'ny Polisim-pirenena mba hangataka ny famotsorana an'i Nasser Abul. Ilay mpandefa tweet, Ali Khuraibit, nibitsika sary tsy dia mazava loatra momba ilay hetsika:
Sarin'ilay hetsika nangatahana ny famotsorana an'i Abul nalefan'i @Ali_Khuraibet.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/12/18385/
 @ahmedhendal : http://twitter.com/#!/ahmadhendal/status/79082440102117376
 @FawazFarhan : http://twitter.com/#!/FawazFarhan/status/79138668471787520